FMBB: hanangana birao ho an’ny taona 2019 | NewsMada
FMBB: hanangana birao ho an’ny taona 2019
Araka ny fanambarana nataon’ny teo anivon’ny federasiona Malagasy, taranja basikety (FMBB), omaly, hisy ny fivoriam-be tsy ara-potoana hotontosaina, ny alakamisy 25 oktobra izao. Mandritra izany no hanaovana ny fifidianana izay birao hitantana ny taom-pilalaovana manaraka.
Mpikambana miisa 7 no hofidina, ny herinandro ho avy izao, eny amin’ny foiben’ny FMBB. Hahitana ny filoha mpitantana, ny filoha lefitra, ny mpitan-tsoratra, ny mpitam-bola, ny mpanolo-tsaina ary ny mpanamarim-bola. Ireo no handray ny fitantanana ny federasiona ho amin’ny taona manaraka, hitarika mandritra ny roa taona, amin’ny maha mpiandraikitra azy ireo. Marihina fa misokatra hatramin’ny faha 23 oktobra izao ny fanaterana ny antontan-taratasy ho an’izay hirotsaka hofidina, raha ny fanazavana nentin’ny filohan’ny kaomisiona teknika eo anivon’ny federasiona malagasy ny basikety.
Ankoatra ny fifidianana izay hotanterahina amin’io fotoana io, ho hita ao anatin’ny fandaharam-potoana ihany koa ny fanaovana ny tatitra ny taom-pilalaovana 2018 sy ny fametrahana ny vinan’asa ho amin’ny taom-pilalaovana manaraka.
Mandra-pivoakan’ny valim-pifidianana dia mitohy hatrany ny fanohizana ny programan-dalao izay mbola tsy vita ho amin’ity taom-pilalaovana ity. Anisan’izany, ohatra, ny fifaninanam-pirenena N1A lahy sy vavy, nanomboka omaly alarobia 18 oktobra ary haharitra hatramin’ny faha 28 oktobra izao. Raha tsiahivina, hiatrika ny lalao voalohany, ho amin’ny anio, amin’ity fifaninanana ity ny sokajjy lehilahy, hifanandrina amin’izany, ny ekipan’ny COSFA Analamanga sy ny ESV Vakinankaratra.